ဖြိုးပြည့်စုံအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ ဒါရိုက်တာကြည်ဖြူရှင် - Shwengwe Games
ဖြိုးပြည့်စုံအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ ဒါရိုက်တာကြည်ဖြူရှင်
October 8, 2019 Shwengwe Games Celebrity 0
အောက်တိုဘာလ (၇) ရက်နေ့ညနေက မြန်မာပလာဇာမှာ တေးသံရှင် ဖြိုးပြည့်စုံ တစ်ယောက် ဆေးပြားများလက်ဝယ် တွေ့ရှိမှုနဲ့ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ် ။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေရော အနုပညာရှင်ညီ အစ်ကို မောင်နှမတွေပါ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေခဲ့ကြတာပါ ။ဒါရိုက်တာကြည်ဖြူရှင်ကလည်း ဒီရက်ပိုင်း ၊အလုပ်တွေပိပြီးစိတ်ကမပျော်ဖြစ်နေတုန်း ” ကိုဖြိုး” သတင်းကြားတော့ပိုတရားရတယ်လို့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ် ။
သူမကအလုပ်ကိစ္စနဲ့နေပြည်တော်ရောက်ချိန်ကိုဖြိုးနဲ့တွေ့တော့အချိန်မရတဲ့ကြားကစကားတွေလုပြောရင်း ဖြိုးပြည့်စုံက သူ့ အသံအိုးနာနေလို့ ဘန်ကောက်မှာသွားပြတာ ၊ ဆရာဝန်က (၃)လလောက်သီချင်းမဆိုပဲနားစေချင်တယ် လို့ပြောလိုက်လို့သူမက နားတဲ့ရက်မှာ ဗုဒ္ဓဂါယာဘုရားဖူးသွား၊ ပြီးရင်တရားစခန်းဝင်လို့လို့အကြံပေးလိုက်တော့ ” ဟုတ်ကဲ့ အစ်မ ” လို့ပြောသွား ပြီး
ဒီလ ၂၁/၂၂ ဘန်ကောက်မှာဆေးခန်းပြဖို့သွားရဦးမယ်လို့ ပြောသွားသေးတယ်လို့ ကြည်ဖြူရှင်က သူမရဲ့ဖေ့ဘုတ်စ် စာမျက်နှာထက်မှာ ရေးသားခဲ့တာပါ ။ သူမတွေ့ဖူးတဲ့လူငယ်ထဲမှာတော့ သူဟာဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းပြီး၊ လိမ္မာတဲ့လူတော်တစ်ယောက်ပါ၊သူ့မှာလှပတဲ့အနာဂါတ်တွေ ၊ အိမ်မက်တွေရှိပါတယ်.လူတော်တစ်ယောက်ခုလိုဖြစ်ရတာဟာကျွန်မအတွက်တော့ ၊ အိမ်မက်ဆိုးတစ်ခု မက်နေရသလိုပါပဲ လို့ စိတ် မကောာင်းဖွယ်ရေးသားထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။
” ကိုဖြိုး ” ရေအားတင်းထားပါ……. ” ကိုဖြိုး” ကိုချစ်တဲ့၊ အနုပညာမောင်နှမေ တွအားလုံး၊”ကိုဖြိုး”အတွက်၊ စိတ်ထိခိုက် ရပါတယ် လို့ကိုဖြိုးအတွက်အားပေးစကားလည်းပြောထားပါသေးတယ် ။ လတ်တလောသတင်းတွေအရတော့ ဆေးပြားတွေဟာ မူးယစ်ဆေးမဟုတ်ဘဲ ရိုးရိုး Candy သာဖြစ်တယ်လို့လည်း သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေတဲ့အတွက် ကိုဖြိုးကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးကလည်း အထင်မြင်လွဲမှားမှု တစ်ခု အဖြစ်နဲ့ပဲ ပြီးသွားပါစေလို့ ဆုတောင်းနေကြတာပါ ။ပရိသတ်ကြီးကလည်း ကိုဖြိုး အမြန်ဆုံးလွတ်ြမောက်လာဖို့ ဆုတောင်းပေးကြပါဦးနော် ။
Source : Khi Phyu Shin
ခရက်ဒစ် Cele Connection
ၿဖိဳးျပည့္စုံအတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနတဲ့ ဒါ႐ိုက္တာၾကည္ျဖဴ႐ွင္
ေအာက္တိုဘာလ (၇) ရက္ေန႔ညေနက ျမန္မာပလာဇာမွာ ေတးသံ႐ွင္ ၿဖိဳးျပည့္စုံ တစ္ေယာက္ ေဆးျပားမ်ားလက္ဝယ္ ေတြ႕႐ွိမႈနဲ႔ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရပါတယ္ ။ဒီသတင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးပရိသတ္ေတြေရာ အႏုပညာ႐ွင္ညီ အစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြပါ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနခဲ့ၾကတာပါ ။ဒါ႐ိုက္တာၾကည္ျဖဴ႐ွင္ကလည္း ဒီရက္ပိုင္း ၊အလုပ္ေတြပိၿပီးစိတ္ကမေပ်ာ္ျဖစ္ေနတုန္း ” ကိုၿဖိဳး” သတင္းၾကားေတာ့ပိုတရားရတယ္လို႔ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကေန ေရးသားထားတာေတြ႕ရပါတယ္ ။
သူမ က အလုပ္ကိစၥနဲ႔ေနျပည္ေတာ္ေရာက္ခ်ိန္ ကိုၿဖိဳး နဲ႔ေတြ႕ေတာ့ အခ်ိန္မရတဲ့ၾကားက စကားေတြ
လုေျပာရင္း ၿဖိဳးျပည့္စုံက သူ႕ အသံအိုးနာေနလို႔ ဘန္ေကာက္မွာသြားျပတာ ၊ ဆရာဝန္က (၃)လေလာက္သီခ်င္းမဆိုပဲနားေစခ်င္တယ္ လို႔ေျပာလိုက္လို႔သူမက နားတဲ့ရက္မွာ ဗုဒၶဂါယာဘုရားဖူးသြား၊ ၿပီးရင္တရားစခန္းဝင္လို႔လို႔အၾကံေပးလိုက္ေတာ့ ” ဟုတ္ကဲ့ အစ္မ ” လို႔ေျပာသြား ၿပီး
ဒီလ ၂၁/၂၂ ဘန္ေကာက္မွာေဆးခန္းျပဖို႔သြားရဦးမယ္လို႔ ေျပာသြားေသးတယ္လို႔ ၾကည္ျဖဴ႐ွင္က သူမရဲ႕ေဖ့ဘုတ္စ္ စာမ်က္ႏွာထက္မွာ ေရးသားခဲ့တာပါ ။ သူမေတြ႕ဖူးတဲ့လူငယ္ထဲမွာေတာ့ သူဟာဘာသာတရားကိုင္း႐ိႈင္းၿပီး၊ လိမၼာတဲ့လူေတာ္တစ္ေယာက္ပါ၊သူ႕မွာလွပတဲ့အနာဂါတ္ေတြ ၊ အိမ္မက္ေတြ႐ွိပါတယ္.လူေတာ္တစ္ေယာက္ခုလိုျဖစ္ရတာဟာကြၽန္မအတြက္ေတာ့ ၊ အိမ္မက္ဆိုးတစ္ခု မက္ေနရသလိုပါပဲ လို႔ စိတ္ မေကာာင္းဖြယ္ေရးသားထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ ။
” ကိုၿဖိဳး ” ေရအားတင္းထားပါ……. ” ကိုၿဖိဳး” ကိုခ်စ္တဲ့၊ အႏုပညာေမာင္ႏွေမ တြအားလုံး၊”ကိုၿဖိဳး”အတြက္၊ စိတ္ထိခိုက္ ရပါတယ္ လို႔ကိုၿဖိဳးအတြက္အားေပးစကားလည္းေျပာထားပါေသးတယ္ ။ လတ္တေလာသတင္းေတြအရေတာ့ ေဆးျပားေတြဟာ မူးယစ္ေဆးမဟုတ္ဘဲ ႐ိုး႐ိုး Candy သာျဖစ္တယ္လို႔လည္း သတင္းေတြ ထြက္ေပၚေနတဲ့အတြက္ ကိုၿဖိဳးကိုခ်စ္တဲ့ ပရိသတ္ႀကီးကလည္း အထင္ျမင္လြဲမွားမႈ တစ္ခု အျဖစ္နဲ႔ပဲ ၿပီးသြားပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေနၾကတာပါ ။ပရိသတ္ႀကီးကလည္း ကိုၿဖိဳး အျမန္ဆုံးလြႀတ္ေမာက္လာဖို႔ ဆုေတာင္းေပးၾကပါဦးေနာ္ ။
ခရက္ဒစ္ Cele Connection
ပိုမိုဆိုးရွားလာတဲ့ ကစ်ကစ်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပြောပြလာတဲ့ တေးရေးမင်းကို
မိဘမဲ့ကလေးများအတွက်ရေးထားတဲ့သီချင်းကို music video ရိုက်ကူးရန် အမေရိကား‌ရောက်နေ‌တဲ့ အဆိုတော် G Fatt
ကျောင်းဆရာမကို ကားကြုံခေါ်တင်ပြီး ရိုက်နှက် ပစ္စည်းလုယက်တဲ့ တရားခံများကိုခက်ခက်ခဲခဲဖော်ထုတ်ပေးသူများကိုကျေးဇူးတင်လျက်
သီလရှင် ဝတ်ရခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ
သရုပ်ဆောင်နေတိုးရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ချီးကျူးစကားဆိုလိုက်တဲ့ ငှက်ပျောကြော်